Eminyakeni ekuphileni komuntu akufundayo eziningi: esikoleni, eyunivesithi, esikoleni zokushayela, ku izifundo ezahlukene. Konke lokhu kudinga izindleko futhi ngezinye izikhathi eside. Nokho, ezinye zazo kungaba esibuyiswe sokubuyiselwa imali yentela nomphakathi. Futhi ungathola ke uthanda lapho ukhokhela emfundvweni yabo izingane esikoleni ngisho nabafowethu nodadewethu.
Isinxephezelo ngoba kwentela yengeniso emfundvweni yabo
Ngokwe-Tax Code, le imali yentela ngoba yesikole uncika zonke izakhamuzi Russian Federation, ukukhokhela izifundo zabo, ngesikhathi esiphezulu ukubaluleka kwayo kumele singeqi ayizinkulungwane 120. Ruble. Lokhu kusho ukuthi izimali ezikhokhwa lokukhokha komunye oyedwa ungabuyisa 13% kodwa hhayi ruble ezingaphezu kuka-15,600 (izinkulungwane 120. * 13%). Ngokwesibonelo, ekhokhela 2012 obuyizinkulungwane 70. Ruble olungaba isinxephezelo okunokwenzeka 9100 (70 ayizinkulungwane. * 13%). Futhi lapho ukhokha ayizinkulungwane 150. Ruble isinxephezelo kuyoba 15600 (120 ayizinkulungwane. * 13).
Kufanele kuqashelwe ukuthi imali yentela ngoba yesikole "ku" ingasetshenziswa njengendlela yokukhokha ukuze lokuqala nelesibili (futhi wonke okwalandela) izinhlangano, kungakhathaliseki injalo (part-time, usuku, kusihlwa).
Isinxephezelo ngoba kwentela yengeniso ukukhokhwa izingane esikoleni
Uma thina ukaznoy imali yentela zenhlalo ukuqeqeshwa, kodwa ukuthola kubalulekile ukugcina izimo ezimbili:
ingane kungazange kufinyelele eminyakeni engu-24 ubudala;
Uma kungenjalo, Kukholakala ukuthi esekhule ngokwanele futhi isebenza, Ngakho-ke, kungaba offset siqu intela yabo engenayo siqu.
Inani eliphelele nokudoswa imfundo yabantwana bakwa kuyinto ruble ayizigidi 50, kumkhawulo lemali okumele walulama -. Ruble 6500. Okusho ukuthi, uma ikhokhwe kwaba, isibonelo, 100 ayizinkulungwane., Isinxephezelo kukhonjelwe Imininingwane 6500 (th-50. * 13%), uma 150 th., PIT ibuye ebuyela inani ruble 6500, ngenkathi uma phezu cwaningo yakhokhwa ayizinkulungwane 40., nokubuyisela kuyoba kuphela 5200 (40 ayizinkulungwane. * 13%).
Kungakhathaliseki kabani emfundweni enikezwa intela ezibanjwayo kwezemfundo, imfuneko ukulungiselela yabo kokutjhejisiswa isimo (amalayisense) izikhungo. Kungenjalo, imali yentela ukuwenqaba.
Ukuze isinxephezelo yentela ngemali engenayo siqu izidumbu abahloli intela kuzodingeka ukuba unikeze:
egcwele 3-PIT isimemezelo;
isitatimende engenayo kuze kuphele isikhathi yangaphambilini ye PIT-2;
ikhophi yelayisensi izikhungo zemfundo kanye mayelana nesivumelwano ukuqeqeshwa;
ikhophi idokhumenti yokukhokha;
ikhophi yesitifiketi sokuzalwa kanye nesitifiketi esishoyo ukuthi waqeqesha abafundi wesikhathi esigcwele;
isicelo sokubuyiselwa imali.
Faka isicelo sokubuyiselwa imali kungaba njalo ngonyaka noma kanye nazo zonke izinkokhelo, kodwa kumele kwenziwe kungakapheli ngemva kokuba inkokhelo iminyaka emithathu. Okusho ukuthi, uma ukufundisa Imali ngo-2010 ukhokhelwe 2009, kumele afake isicelo sokubuyiselwa imali ngo-2012, hhayi kamuva. Futhi imibhalo ukukhokhelwa kufanele ufunde igama umuntu isicelo ebanjwayo. Ngokwesibonelo, uma umzali ukhokha semester ngoba indodana yakhe noma indodakazi, ngubani wayephendukele engu-24 ubudala, futhi idokhumenti yokukhokha kuzosho igama lakhe, leli nani emalini angeke amukelwe.
Ngemva ukuhanjiswa Ukumemezelwa isinxephezelo ukudluliswa unikezwa izinyanga. Nokho, intela kungaba kwenziwe maqondana wakhe edeskini audit, okuzothatha izinyanga ezintathu. Ngakho-ke, langempela nokubuyisela nkathi izinyanga 4 (nakuba kungase kuthathe izinyanga eziyisithupha umkhuba).
Uma sokubuyiselwa imali yentela ngoba yesikole ingaphezu sasetshenziswa ifomu lokukhokha, noma kwentela yengeniso ukuba zibuyiswe ngaphezu kwalokho isakhamuzi okhokhela ngonyaka, ngengxenye engasetshenziswanga ukudluliswa onyakeni olandelayo ngeke ibuyiselwe. Kuyadingeka ukuba sicabangele iqiniso lokuthi imali ebanjwayo nomphakathi osebenza ku zokwelashwa, ngakho uma ngaphakathi isakhamuzi ngonyaka iphathwa ebanjwayo phakathi yesikole kanye nokwelashwa kuyodingeka ukusabalalisa ngokwabo.
Imali ebanjwayo ku ukuqeqeshwa unganikezwa hhayi kuphela ukuba kukhokhwe cwaningo eyunivesithi, kodwa futhi esikoleni, enkulisa (kuleli cala, isevisi okuhambisanayo kumele lelipelwe kwinkontileka ngokuhlukile), izifundo zokuvuselela.
Ungafaki sokubuyiselwa imali yentela ngoba yesikole uma kukhokhelwe ngumqashi, isabelomali idolobha noma inhlokodolobha umzali. Buyisela kwentela yengeniso ngeke isebenze uma isakhamuzi esikhathini esedlule wayengeyena imali encane yentela at trinadtsatiprotsentoy kwesilinganiso sentela.
Yiziphi izintela esakhokhwa Inkampani?
Intela Ukungena kuya ku-intanethi: amathiphu namasu
Iphone kungenziwa zangena kuma ngesikhathi touch of a inkinobho!
Indlela ukwethula ukudla okuqinile ingane nalapho ukukwenza
Indaba efingqiwe: "Meyi Ebusuku, noma baminza" N. V Gogolya
Izimpawu isitayela yesayensi kombhalo. Izici eziyinhloko isitayela yesayensi yokukhuluma
Iminyango Veneered: ukuthi kuyini nokuthi ukukhetha ilungelo?
Karlstejn Castle eCzech Republic
Ihhotela Napa Prince Hotel Apts 3 * (Cyprus, Ayia Napa): izithombe kanye nokubuyekeza
LCD "Amber": ukubuyekezwa, umakhi, isithombe, isakhiwo
Sulfuric acid kanye nokusebenzisa kwayo